Ny Huawei Nova 5 dia haseho amin'ny 21 jona ofisialy | Androidsis
Ny Huawei Nova 5 dia efa manana daty fampisehoana
Amin'ity herinandro ity dia manana isika vitsy ny fivoahana momba ny Huawei Nova vaovao. Izy io no taranaka fahadimy amin'ity karazana telefaona avy amin'ny marika sinoa ity, izay hotarihan'ny Nova 5i, izay efa ananantsika ampy ny famaritana azy. Hatreto dia nisy ny fivoahana, na dia mistery aza ny daty nanehoana an'io sokajy io. Hatramin'izao.
Hatramin'ny farany dia naseho ny daty hahafahantsika mahafantatra amin'ny fomba ofisialy an'io elanelan'ny Huawei Nova 5. Hanomboka amin'ity volana ity, ao anatin'ny roa herinandro latsaka, rehefa atolotra azy ireo amin'ny fomba ofisialy Toa afaka manantena modely roa hitovy isika.
Huawei dia efa nanamafy izany Amin'ny 21 Jona no hanolorana azy ity faritra ity amin'ny fomba ofisialy. Noho izany dia mila miandry herinandro mahery kely isika amin'izany. Hetsika izay hankalazain'ilay orinasa any Shina, izay hanehoan'izy ireo ireo maodely ireo izay mahatratra ny ampahatelony.
Amin'ity faritra ity dia afaka manantena isika fa hisy telefaona vaovao roa: Ny Nova 5 sy Nova 5i. Amin'ny telefaona roa dia efa nisy fivoahana tato anatin'ity herinandro ity, izay noresahinay. Noho izany dia mahazo hevitra momba ny hamela antsika amin'ny marika sinoa isika amin'ity sokajy vaovao ity.
Na dia toa hisy aza ny fahasamihafana miavaka eo amin'ireo modely roa. Na dia modely avo lenta aza ny Huawei Nova 5, ny Nova 5i dia ho antonony antonony satria antenaina hampiasa Kirin 710 ho mpikirakira azy. Modely iray mahatratra ny ampahany izay efa manana telefaona maromaro ny marika sinoa, toy ny P30 Lite na ny P20 Lite 2019.
Amin'ny 21 Jona dia hamela fisalasalana momba ity karazana Huawei vaovao ity isika, tonga amin'ny fotoana sarotra ho an'ny orinasa izany. Saingy mety misy elanelana misy amin'ny fivarotana tsara eny an-tsena. Hifantoka amin'ny vaovao momba ireo telefaona vaovao an'ny marika sinoa ireo izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei » Ny Huawei Nova 5 dia efa manana daty fampisehoana
Ny Vivo X15 dia aseho amin'ny lafiny rehetra amin'ny fandikana vaovao
Ny Galaxy M40 dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy